Wararka ka yimid AutoCAD 2012, qaybta hore - Geofumadas
Ugu dambeyntii, iyo sida lagu dhawaaqay taariikhdan, AutoDesk waxay bixisay dhammaan macluumaadka la xiriira warka ku saabsan AutoCAD 2012. Sidoo kale, waxa loola jeedo farsamooyinka kale, marka laga reebo AutoCAD for Mac, oo weli lagu hayo wixii aynu sanadkii hore ku aragney version 2011.
Laga soo bilaabo bilawga, waxaan ku faraxsannahay inaan ogaano qaabka cusub ee dwg file aan loo baahnayn, qaabka 2010 waa la hayaa; in ay la versions ka weyn ee AutoCAD 2010 u baahan doonaa si loogu badalo si TrueView. Iyadoo AutoDesk ayaa shaaca ka qaaday in uu yahay Hir billabo dhibic markab shisheeye, farriinta ah in u muuqataa marka la gvSIG, Microstation, Bricscad ama software kasta oo kale in haatan ay abuuri karaan file billabo la furay shaqeeya. Waxay igu xasuusineysaa dacwadihii hore ee lahaa inuu yahay milkiilaha qaabka iyo in kastoo ay xaq u leedahay, waxay u muuqataa inaan loo baahnayn sidii aniga oo ah fayrus.
Sidoo kale, waa mid xiiso leh in la ogaado in version cusubi uu taageerayo geeddi-socodka is barbardhiga, sidaas darteed haddii aad haysato kaar ama video-ka processor badancalaamadda waxaad dareemi kartaa farqiga marka la samaynayo jadwalka sida soo bandhigida iyo xayeysiinta muuqaalka 3D.
Iyo arrin kale, oo aan sidoo kale jecel nahay waa in la ogaado in versionkan si sharci ah loogu soo rogi karo ujeedooyin imtixaan, inkastoo nuqulku si buuxda u shaqeynayo maalmaha 30.
Halkan waxaad ka heli kartaa download AutoCAD 2012, bilaash ah.
Qaar ka mid ah arrimaha aan doonayo in aan qabto si loo xiray, gaar ahaan, sababtoo ah isbedelka badan oo arrin la mid ah wixii uu sameeyey oo uu ku Microstation Bentley V8i yihiin, si kastaba ha ahaatee inta badan AutoCAD ku 2012 cusub u dhaafa. Marka ugu horeysa waxaan doonayaa inaan taabto dhismaha xogta iyo soo saarida.
Ma jiraan waxyaabo badan oo la cusbooneysiin karo, taas oo ah midka ugu fiican ee ay tahay in AutoDesk ay sameyn karto hagaajinta jadwalka jira. Sababtan awgeed, qalabka la hagaajiyay ayaa istaagaya, waxyaabaha ka dhigaya mid firfircoon oo ka faa'iideysanaya qalabka garaafka; inkastoo aad u aragto isticmaalka weyn ee hagaajinta version 2011:
Hagaajinta kala-saarista. Waxaan xusuusneynaa in xajinta ay tahay nooc ka mid ah istaroogga casriga ah ee xagjirka ah ee qaada muraayada hawada; waxay ahayd dhibaato si aan loo daaweyn karin sida muraayad jajab ah sida dhinacyada xisaabinta ama jarista.
... dami maalinta aan u isticmaalo si aan u sameeyo khadadka casriga ...
Hadda waxaa lagu daaweyn karaa sida ugu xariijinta caqliga of Corel Draw, ku dar oo meel kale u guuri iyo istiraatiijiyado beddelaad ah si ay u arkaan. Xitaa doorasho loo yaqaan qalab isku dhafan waxay kuu ogolaaneysaa inaad abuurto kala-soocida adoo na caawinaya meesha aad rabto inaad ku socoto.
Sidaa si la mid ah waxaan ku aragnaa waxa dhaca hatch, maareynta qaababka ayaa wanaajisay muddo dheer, si ay u noqoto mid firfircoon. Laakiin hadda qabsashada leedahay tamar dheeraad ah oo siman waxay quseysaa buuxinta buuxa.
Tani waxay faa'iido u marayo sida qiimaynta, labada cirif, ellipses, geesaha of polylines, wejiyadooduna, mleaders, inkasta oo tan dambe ayaa waxaa ka mid ah wax ka badan in, sababtoo ah waxaa jira qanjidhada awood badan iyo u dhawaanshaha qoraalka. Sample waxaan kuu soo deynayaa fiidiyaha sida uu u shaqeeyo.
Ka mid ah faa'iidada ugu badan ee ficilkan firfircoon ee la siiyey shay waa Amarada kala duwan, taas oo hadda noqonaysa unug firfircoon oo aan ahayn isku xirnaanta fudud ee tirooyinka dabacsan. Kadib samaynta nidaamka, shaygu wuxuu sii wadaa xiriirka, wuxuu noqonayaa mid toosan, curvature ama jawi 3D, iyadoo ku xiran nooca qorshaha. Great, waayo, haatan waxaad ku kaxaysan kartaa design awood kar ka badan sida waa ay dhacdo ulo gudban ka Joist ah, awoodin in wax laga beddelo hannaanka toosan, miisaanka, masaafada ama xagal aan haysan si ay redraw xitaa haddii aan beddelay camber ah.
Marka laga reebo xitaa Array waa la koobi karaa, xitaa haddii aysan u muuqan. Waxaad dhihi kartaa, Waxaan doonayaa inaan nuqul ka sameysto noocaan ah, sida kiiskii Joist laftiisa, tan iyo marxaladdan, si aad u daran. Taasi waxay ka dhigan tahay qaabab sida kanabooraha, kuraasta isku xiran, nalalka qolka, geedaha, iwm. waa la naqshadeeyn karaa sida aan u adeegsanay talaabada Cabbiraadda caqabadaha, iyada oo kala duwanaanta ay kuwan ku hayaan ururada iyo isku xirnaanta sheyga isku dhafan.
Nadiifinta duubista. Tani ma aha mid la yaab leh kuwa naga mid ah ee isticmaalay qalabyada GIS, halkaas oo nadiifinta fayaqoolajiyada ay ka mid tahay ka saarista wasakh. Hadda AutoCAD 2012 waxay hirgelinaysaa badhanka loogu talagalay waxyaabo isku dhafan.
... Waxay ahaan laheyd caawinaad weyn markii aan haysto kaaliye wanaagsan oo ku duubay lakabta sawirada isla ...
In badan oo leh sawir lagu cabbiray. Tani waa mid ka mid ah qaababka ugu fiican in AutoCAD gaadhay in version this 2012 sida cusub waa in ay la samayn karaa on Daqsi by qalabka muuqaal ah soo bandhigay kasta walxaha Guntin. In fiidiyowgaan waxaad arki kartaa inay shaqeyneyso, xiiso leh, waxqabadka ay tani ku keeneyso waxa aan u adeegsan jirnay walxaha fudud.
... tusaale ahaan sawirka faahfaahinta biraha xoojinta biraha ... waa maxay dareen! haddii miisaanka la bedelay, madaxduna waxay rabeen inay xajistaan ​​wareegyada.
Maxaa Cusub ee Ribbon? Fursad gaar ah oo la yiraahdo Contents Explorer ayaa lagu daray, taas oo i xasuusinaysa wadooyinka ArcCatalog, markaa uma dhaqaaqo raadinta faylasha dhammaan Windows Explorer.
Taas waxaa la mid ah tan, waxaan ku daray adeegsiga AutoCAD Exchange, kaas oo horay u arkay laakiin aan ka ahayn miiska, laakiin mawduuca Ribbon ayaan ku taabanayaa boosteejo kale sababtoo ah waxaa jira horumarin ku habboonaanta habboon mudan.
Khadka talisku, wuu dhimanayaa laakiin wuu noolaanayaa. Tani waxaa la is waydiiyay, iyadoo ah dhaxalka dinosaurs. Laakiin helitaanka degdegga ah ee amarrada ayaa ah mid caadi ah oo ka mid ah kartoonada; wax badan ayaan arki karaa marka Ribbada ay timid inay nagu qarsoodo AutoCAD 2009.
Hadda waxaan ku darnay shaqeyn aan dhammaystirneyn, oo la mid ah waxa aan ku sameyno Google, waxaan kaliya qori karnaa. waxay leeyihiin lahaa si aad u aragto haddii ay ulo, sida badan lagu lumin karaa in amarka Dhanka kale la mid ah, laga yaabee samayn karin haddii laabtay search caqli iyo waannu soo noqon amarrada ah in aan inta badan la isticmaalo ee liiska ama waxaannu xusuusan nahay hotkey si aan joogo .
Waxay gacan ka geystaan ​​horumarinta wax soo saarka. Waxaa jira warar sheegaya in dib loo dhigay, laakiin haddii ay yimaadaan waa la soo dhaweynayaa. In this Waxaan qabaa AutoDesk iyo Bentley la ogeysiin ma ledhay doonaa waqtiga, waxaan lahaa horumar ee ka qabashada midabada laakiin diyaarado sababo la yaab leh ee ka soo baxa CAD ah (marka la barbardhigo GIS) eegi wanaagsan ee monochrome badan midab.
Abaabulsanaanta Horumarinta. Tani waa wax ku cusub in version this, dhab ahaantii ka version 2011 u yimid laakiin tani ayaa la tixgeliyey by AutoDesk dheeraad ah xooga iyo sida aan ku aragno a funcinalidades dheeraad yar ayaa lagu soo daray. Microstation waxay ka hirgelisay XM, laakiin waxa AutoDesk uu sii socdo, sida aan ku arki karno fiidiyowgaan.
Hawlaha hufnaanta waxay ku jirtaa guddiga hantida shey kasta, iyo sidoo kale maamulaha lakab si uu u codsado lakab dhan. Intaa waxaa dheer, waxaa loo adeegsan karaa qaab-dhismeed ee daabacaadda oo u muuqda qaab hab-dhaqan ah dhinacyo badan; Waxaan u maleynayaa in tani ay saameyn ku yeelan doonto bandhigga muuqaalka, iyo sidoo kale markii buuxinta buuxda ee soo-gaadhista.
... illaa iyo maanta (sanad ka hor waxsii sheegista Mayan) waxaan awoodi doonaa inaan daabacno diyaaradaha leh lafaha midabka ee asalka ah ...
Hagaajinta Kale ee Kale. Xulashada miisaanka ayaa lagu darey faahfaahinta, tani waxay kaa caawineysaa inaad iska ilaaliso inaad haysato qaabab ku habboon qoraallada oo kaliya oo u adeega in ay calaamadiyaan ra'yiga. Intaa waxaa dheer, caleenta caleen waa wax la mid ah waxa Microstation ay ku sameyso qaababka, laakiin leh dhadhan yar iyo isdhexgalka ee daaqada toosan taas oo hubaal ahaan ka caawin doonta hagaajinta maareynta soo saarista.
Dukumintiga Super. Tani waa tan ugu fiican, inkastoo aan weli dheefin karo. Sawirka ayaa u jeestay adduunka, laakiin in yar oo naga mid ah ayaa qiyaasay hanaanka aan u nahay dadka rayidka ah.
Laakiin waxay ka faa'iideysan doontaa isticmaalayaasha Autodesk Inventor, sababtoo ah hadda imtixaannada sida SolidWorks, Pro / ENGINEER, CATIA, Rhino iyo NX.
Ugu dambeyntii, ma rabo inaan diido waxa aan ku arkay jiilka faylasha pdf. Arrin kale oo waligeed aan waligeed laheyn mulkiil buuxda, maahan sida hadda.
Faylasha pdf-ga. Tani ma ahan casriga, laakiin waa hagaajinta farsamooyinka ka yimaada version 2010. Ma ahan oo kaliya oo soo dira dhibcaha, laakiin waa la qeexi karaa haddii ay soo dirto faylka oo dhan, haddii ay soo dirto hal lakab, hal qormo ama haddii uu ka tago bogag badan.
Kadib, waxaad dooran kartaa qiyaasta sawirada iyo haddii aad rabto in xarfaha la geliyo. Tani waxay ka faa'iideysan doonaan heshiis aad u weyn in file PDF ahaan, maxaa yeelay, halkaasaa lagu demin karaa ama off layers, I xasuusinaysaa waxa ay ka dhigeysaa in leeg barnaamijyada sida Corel soo bax iyo Adobe muujiye ... oo horay barnaamijyo kale oo badan maanta yeelayo.
Xaaladda Microstation, haddii pdf aan la soo saarin ikhtiyaarka 3D uma tago lakabyo kala duwan; mana jiraan wax fursado badan oo lagu kala dooran karo shuruudaha ka soo baxa inkastoo loo dhoofiyay pdf for 10 sano ka hor.
Halkan waxaad ka heli kartaa daawashada fiidiyaha ee sida pdf uga shaqeeyo AutoCAD 2012.
PDF Qarsoodi. Xaqiiqdu waxay tahay in abuurista faylasha pdf aysan ahayn mid cusub, laakiin ka baxsan waxaan jeclaan lahaa waxa AutoCAD 2012 uu sameeyo iyadoo la waco faylka pdf oo ah tixraac iyo isdhexgalka. Inkastoo halkan la joogo muddo laba sano ah (AutoCAD 2010), hadda AutoDesk waxay sameyneysaa buuq badan oo ka faa'iideysanaya waxoogaa horumar ah.
Ma ahan wax xun, sida ugu fiican ee aan u arkay isdhexgalka faylasha pdf oo ku jira laymanka vector sababtoo ah waxyaabaha kale ee aad sameyn kartid:
Qalbi si aad u qariso qaybo ka mid ah diyaaradda
ku sawir markaan adigoo isticmaalaya siyaabaha loo yaqaan 'pdf vectors'
Jooji ama u leexo lakabyada pdf
Ugu danbeyntii, waxaad lahaan lahayd hal doorasho oo keliya isku dar o koobi xayndaabka oo waxaan u qaadnaa dameerka waana la qaban doonaa. Xaaladda Microstation, pdf waa la jari karaa, laakiin waxay u dhaqantaa sida hadday tahay sawir, ma sameyn karo SNAP ama la falgalaan layers iyo waxaan dareemayaa in labadaba aysan helin taageero deg deg ah si loo aqoonsado dusha sare ee pdf.
Waa hagaag, ma ahan inaad sameyso boosto ku soo gaadho godadka oceanic, waxaan halkaan halkan joogayaa dib u eegida kowaad ee warka ee AutoCAD 2012. Waxaan sii wadeynaa xiga.
Maqaalkani wuxuu soo koobayaa Maxaa Cusub ee AutoCAD 2013
Post Previous«Previous 10 egeomates March 2011
Post Next Waa maxay sababta ay dumarku u adagtahay in ay hurdaanNext »
29 Jawaab ka bixisay "News from AutoCAD 2012, qaybta hore"
Carlos, in la dhigo qoraalka on curve waa amarka qaanuunka Arct
Luis, tani waa liistada dhammaan amarrada "AutoCAD", iyada oo la adeegsanayo sanadka iyo sanadka fulinta
La-talin degdeg ah
Waxaan u baahanahay inaan qoro gawaarida oo aan ka heli karo qalabka cad ee Autocad 2012 ee MAC, porfa haddii qof uu ogyahay sida loo sameyn karo mahadnaq adiga monton !!
Salaan ka timid Chile
Waxaan rabaa inaan ogaado waxa amarkoodu yahay iyo astaamaha ay wataan shaqadooda
Isku day in aad ku sameyso laba cusub oo cusub.
Hubi inaadan rabin inaad sameysid wax fillet ah shayada ku jira 3D oo aan la jarin, oo aanad isku dayin shayada faylka dibadda tixraaca ah, kuwaas oo aan ahayn multiline, aan xannibneyn.
Elias Sánchez isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan dhib ku qabaa amarka Fillet, waxaan ku gartaa qaladkan soosocda markaan isku dayo inaan jajabiyay jaantus «Fillet wuxuu ubaahanyahay xariiqyo 2, arcyo, ama wareegyo (ma xayiri doono tixraacyada). Waxaan sugayaa jawaabtaada mahadsanid.
Marco de Chile isagu wuxuu leeyahay:
Waxaa la ii sheegay in version 2012 uu leeyahay amar ama shaqeyn oo la mid ah muuqaalka muuqaalka hore. Anigu waxaan ku xiran yahay Ingiriis mana aanan helin tan. Qof ayaa i caawin kara? Waad ku mahadsantihiin !! Ku salaamayaa dhammaan.
Mauricio vilugron hurtado isagu wuxuu leeyahay:
ok ok aad ayaan kaaga mahad naqayaa caawimaadaada iyo helitaankaaga ..
Sahamiyeyaashu, si ay dib ugu fikiraan, dhibcaha dib u eegaan.
Haddii aad wax badan qaadatid, xisaabi oo meelna sii dhigo, laakiin marwalba waxaad la shaqeysaa dhibco.
laakiin waqtiga dib loo fiirsado, geedku miyuu ka fiirsan doonaa?
Ha u kicin xayndaab, laakiin cagajugleyn ka dhex socota dhammaan saldhigyada aad xiiseyneysid inaad u dirto GPS, oo la mid ah waxa aad ku sameysid toos ah.
Waxaan xiiseynayaa in aan fuulo isku-dhejinta, oo leh saldhigyo mitir walba oo ah '5 mitir' (tusaale ahaan), su'aasha ugu horeysa ayaa ah, haddii isugeynta qalooca lagu dhejiyo GPS, kaliya sida isku tooska tooska ah?
Waxaan dhegeysanayaa jawaabtaada
Maxaad xiiseyneysaa inaad fuulaysid?
Saldhigyada xariiqda dhexe?
U dhoofi qaab qaabka gpx, qalooca lama soo bandhigi doono, laakiin polygon. Sida ugu dhow ee aad saldhigyada u abuuri karto, macluumaadka aad ku hayso qal-qalooca.
Hagaag, waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado haddii qof kale iga caawin karayo sida loo soo dejiyo isku-wareegga qalloocan GPS (trimble r6)
maurice isagu wuxuu leeyahay:
Salaan, waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado haddii qof i caawin karo, sideen ugu keeni karaa isku-dhejin wareeg ah GPS (R6 trimble)
Evelyn Sossa isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan u baahanahay liistada amarrada gawaarida gawaarida ee Ingiriisiga iyo Isbaanishka, qofna ma i caawin karaa?
Waa wax qariib ah, ma aanan arkin in aniga igu dhaco.
Qiyaasida marka labo lifaaqan yihiin: naqshad ay weheliso leydiin kale, ka dibna way isku duubanyihiin oo hal dhisme ayaa la sameeyay, sidee baan u saxayaa tan? caawimo fadlan
kaaliye isagu wuxuu leeyahay:
Hambalyo, waxaan haystaa dhibaato ...
marka la abuuro pdf-yada leh autocad 2012, isku-dhiska iskubeddada x5 ma aqoonsana iyaga. Iyada oo noocyo kale oo autocad ah aysan dhicin. Waxaan doonayay inaan ogaado sida loo saxo.
Wali way niyad jabsan tahay marka la eego barnaamijka daaqadaha daaqadaha, waxaa jira amarro badan oo maqan, sababta aan u sharxi kari
Oscar Lombana isagu wuxuu leeyahay:
Hada, Waxaan jeclaan lahaa in aan ogaado waxa dhacay 3d, waxaan arkay in 2012 aan la heli karin, oo aan ku beddeli karo.
HIDELEMIN SAC isagu wuxuu leeyahay:
Inta badan ITS NEW AUTOCAD qaynuunnadii 2012 iyaga lahaa 3D MAX !!, hadda oo ay leedahay barnaamijka in ay kaga dayanayaan amarradaada !! MONSE IN, IYO SIDOO KALE CARADA !!
maalin wanaagsan ayaan jeclaan lahaa inaan arko haddii qofna i caawimi karo mawduuca xarriiqda fogaanta iyo azimuth ee barnaamijka Quantum Gis
Isabel isagu wuxuu leeyahay:
Guji "Mem Patch" wuxuu abuuraa khaladaadka soo socda: "waxaad u baahan tahay inaad dalbato dhejin marka shaashadda liisanka ay muuqato" mana ii oggolaaneyso inaan sii wado rakibida maxaa yeelay waxay i siineysaa lambar dhaqdhaqaaqa aan dhameystirneyn; Sideen ku xallin karaa dhibaatadan?
XAALADDA isagu wuxuu leeyahay:
En http://www.peruviantec.tk waxaa jira wax ka badan 200 videos of Autocad iyo sifooyinka Cusub ee Autocad 2012 ee Isbanishka.
Mahadsanid Jorge, muddo sanado ah AutoCAD waxa ay laheyd xaddidaad.
Jorge Eliecer Garces Bolivar isagu wuxuu leeyahay:
Noocyada kale ee cusub ee AutoCAD 2012 waa soo dejinta sawirrada tixraaca ee qaabab kale oo hore u u baahnayd sida qadarin sida AutocadMAP si loo geliyo sawir raajo ah.
Ka dibna qaababka muuqaalku waxay taageertaa AutoCAD 2012 iyo sidoo kale nooca LT 2012 (Sanad kasta AutoCAD LT waxay ku dhex jirtaa qalabyo badan oo buuxda)
Faylasha raajka ah ee taageera:
.bmp, .cals-1, .dds, .doq, .ecw, .flic, .geospot, .hdr, .ig4, .jpeg, jpeg2000, .jifif, .MrSID, .NITF, .OpenEXR, .pcx ,. pict, .png, .psd, .rlc, .targa, iyo sidoo kale taageertaa images tiff la quruxsan.
Waxaan rajeynayaa in waxtarka uu gacan ka geysto.
Ilaa wakhtiga xiga.
Draftsman of Architecture iyo injineernimada
Enzo B isagu wuxuu leeyahay:
sidaas transparency labada layers sida walax iyo PDF jiilka ka heli durba 2011 autocad ah ... sidaas lei heli waxba kuma kala duwana yihiin labadan arrimaha u dhexeeya 2011 autocad iyo 2012 autocad, haddii ay ku daray si faahfaahsan qaar ka mid ah yar oo u maaraysay in ogayn ayaa.
Enrique Montejo isagu wuxuu leeyahay:
Macluumaadkaagu waa mid aad u faa'iido leh, shaqadayda sida macallin jaamacadeed.
Waxaan uga mahadcelinayaa UDO.ANZ.ve